अरुले टिका लगाए, प्रचण्डले लगाएनन् | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अरुले टिका लगाए, प्रचण्डले लगाएनन्
प्रकाशित मिति २२ आश्विन २०७६, बुधबार १९:१५ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासभित्र यसपालि दशैंको रौनक फर्केको छ । अघिल्लो वर्ष छोरा प्रकाश दाहालको निधनका कारण उनीहरुले टिका लगाएका थिएनन् ।
यसपाली दशैंको टिका लगाउन प्रचण्डका छोरीहरु रेणु दाहाल र गंगा दाहाल आफ्ना सन्तानहरुसहित खुमलटार आएका थिए । प्रचण्डको उपस्थितिमा उनीहरुलाई आमा सीता दाहालले टिका र जमरा लगाइदिइन् ।
प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहालले टिकाटालोका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी छन् । तस्वीरमा प्रचण्डको निधार खाली देखिन्छ भने उनी आफैंले कसैलाई टिका लगाइदिएका पनि छैनन् । साथै प्रचण्डकी बुहारी तथा खानेपानीमन्त्री विना मगर पनि अनुपस्थित छन् । सायद पुत्र वियोगको घाउ आलै भएर हुन सक्छ, तस्वीरमा प्रचण्ड दम्पत्तिको अनुहार भने मलिन देखिएको छ ।
आफ्ना चार सन्तानमध्ये दुईजना प्रचण्ड दम्पत्तिले गुमाइसकेका छन् । जेठी छोरी ज्ञानु केसीको स्तन क्यान्सरका कारण २०७० सालमा निधन भएको थियो । एक मात्र छोरा प्रकाश दाहालको दुई वर्षअघि मृत्यू भएपछि उनीहरुको सहाराका रुपमा दुई छोरी र नातिनातिनाहरु छन् ।
जनयुद्धमा गएदेखि प्रचण्ड र तत्कालिन माओवादी नेताहरुले घोषितरुपमा दशैं बहिष्कार गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि लामो समयसम्म प्रचण्डले टिका लगाएनन् । २० वर्षपछि २०७४ सालमा प्रचण्डको निधारमा विजयादशमीको टिका परेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई पनि टिका र जमरा लगाइदिएका थिए ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले सामाजिक सञ्जालमा टिकाटालोका तस्वीरहरु सेयर गरेपछि निकै क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो ।
फोटोहरु: गंगा दाहालको फेसबुक
गेस्टहाउसमा प्रेमीसँग रातभरी बसेकी युवतीले यौन शक्ति बढाउने भन्दै यस्तो गरे पछी…
एजेन्सी । यौन शक्ति बढाउन सुई प्रयोग गर्दाएक युवतीको ज्यान गएको छ। घटना भारतको हो । भारतको महाराष्ट्रस्थित भिवंडी…
हावाहुरीमा परेका घाइतेका लागि नेपाली सेना र प्रहरीका जवानले गर्न थाले रक्तदान
काठमाडौं । आइतबार साँझ आएको हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा रगतको अभाव भएको छ ।रगत अभाव भएपछि नेपाली सेना…
आपत पर्दा के अब चीनवाट पेट्रोलीयम पदार्थ आउँछ ?
काठमाडाैं । नेपाल र चीनका विच पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । तर अझैपनि चीनवाट नेपाललाई आपत पर्दा…
चार अर्बको युनिटी काण्ड : अदालतमा खैलाबैला, कालुको सक्रियतामा बाह्र भाइलाई सुनपानी !
काठमाडौं । कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकेको…
बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाल पर्यवेक्षक
काठमाडौं । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको प्रतिआंकवादसम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले पर्यवेक्षक रूपमा मात्र सहभागी हुने भएको छ ।
संयुक्त सैन्य तालिम…
लुम्बिनीलाई कुरुप बनाउँदै मुरारकाको सिमेन्ट उद्योग
काठमाडौं । रुपन्देहीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले सरकारी मापदण्ड विपरित काम गरेपछि स्थानीयबासीले उद्योगविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन् । विशेष…
सुनको मुल्यले अहिलेम्मकै रेकर्ड तोड्यो, आज १५ सयले बढेर ८० हजार नाघ्यो 8 views